HiSea Ekwentị mgbaàmà Jamming Ngwọta maka VIP na Jordan Prime Minister Office. Na afọ 2011, ekele maka mbọ ndị ahịa anyị, site na ngwọta ọkachamara anyị, ha meriri mmeri ahụ: Usoro mgbaàmà ekwentị Jamming maka ụlọ nke 6 ala na-egosipụta iko iko, wh ...
HiSea High powe Jammer Ngwọta na ụlọ mkpọrọ Panama La Jolieta N'afọ 2013, HiSea nwere nsọpụrụ ịbụ onye ngwọta nke ụlọ mkpọrọ Panama La Jolieta. Ngwọta ihe ngwọta: arụnyere na 3 na-ejikọ ụyọkọ zuru ezu nnukwu ike mgbaàmà jammer, a na-achịkọta jammer niile (na Gap).
HiSea Signal Jammer Solution to Kenya Military Vehicle N'ime afọ 2012, kwadoro ndị ahịa anyị, bụrụ ihe ịga nke ọma bụrụ ndị na-ewepụta ngwa ahịa nke ndị agha Kenya. Otu n'ime arụkọ ọrụ ọnụ, ụgbọ ala / ugbo ala na-agbanye mgbama nke chọrọ mgbawa. Ngwọta profaịlụ: arụnyere na usoro 2 ...